ကျွန်ုပ်တို့အကြောင်း |Taizhou Huangyan Longxin Mold Co., Ltd.
Longxinမှိုကို 2019 ခုနှစ်တွင် စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး မူရင်းကုမ္ပဏီကို 2006 ခုနှစ်တွင် တည်ထောင်ခဲ့ပြီး 15 နှစ်ကျော်ကြာ ပိုက်တပ်ဆင်သည့် ပုံစံခွက်ဒီဇိုင်းနှင့် ထုတ်လုပ်ရန် ကတိကဝတ်ပြုခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ အဓိကထုတ်ကုန်များမှာ CPVC ပိုက်နှင့် အံဝင်ခွင်ကျမှိုများ၊ UPVC ပိုက်မှိုများ၊ PVC flaring ပိုက်များဖြစ်သည်။ မှိုများ၊ PPR ပိုက်တပ်ဆင်ခြင်းမှိုများ။
ကျွန်ုပ်တို့သည် စိတ်ကြိုက်ပလပ်စတစ်အသုံးအဆောင်များ မှိုထုတ်လုပ်ရာတွင် အထူးအတွေ့အကြုံရှိသည်။မြောင်းနှင့် ရေနုတ်မြောင်းစနစ်၊ သောက်သုံးရေပေးဝေရေး၊ ခေါင်မိုးရေနုတ်မြောင်းစနစ် အပါအဝင် PVC / CPVC / PPR / PP / HDPE / etc.
လွန်ခဲ့သည့် 15 နှစ်အတွင်း Longxin မှိုသည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးတွင် ပိုမိုရေပန်းစားလာခဲ့သည့် လူများဦးတည်သော အယူအဆနှင့် ထုတ်လုပ်မှုနည်းပညာကို လိုက်နာကာ ပိုက်နှင့်ကိုက်ညီသောမှိုနည်းပညာ၏ သုတေသနနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် ကတိပြုခဲ့ပြီး၊ ကျွန်ုပ်တို့ ဆက်လက်လုပ်ဆောင်သွားပါမည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ဖောက်သည်အသစ်နှင့် အဟောင်းများ၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းရန် သုတေသနနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး။
ပိုက်တပ်ဆင်ခြင်း၏လုပ်ဆောင်ချက်အရ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ပိုက်တပ်ဆင်ခြင်းမှိုကို အောက်ပါအမျိုးအစားများအဖြစ် ပိုင်းခြားနိုင်ပါသည်။
1. PVC ပိုက်အသုံးအဆောင်များအတွက် မှို (အမြင့်နှင့် ဖိအားနည်းများအတွက် ဆိုလိုသည်မှာ ရေပေးဝေခြင်းနှင့် ရေနုတ်မြောင်းများ)
1) မြင့်မားသောဖိအားဧရိယာအတွက် CPVC ပိုက်လျောက်ပတ်သောမှို
2) ရေနုတ်မြောင်းအတွက် UPVC ပိုက်မှို
3) PVC flaring ပိုက်မှို (ရေပေးဝေမှုအတွက်အဓိကဆွဲစနစ်)
4) ဝါယာကြိုးတပ်ဆင်ခြင်းမှို၊ နံရံတွင်ထည့်သွင်းထားသော PVC ပိုက်တပ်ဆင်ခြင်းအမျိုးမျိုး။
2. PPR ပိုက်နှင့် အံဝင်ခွင်ကျမှို (အိမ်တွင်းရေပေးဝေမှုစနစ်၊ ရေအေးနှင့် ရေနွေးများအတွက်)
Longxin မှိုသည် ဖောက်သည်များအား အပြည့်စုံဆုံး ပိုက်နှင့် အံဝင်ခွင်ကျ မှိုဖွဲ့စည်းခြင်း ဝန်ဆောင်မှုကို ပေးစွမ်းနိုင်ပြီး သုံးစွဲသူများ၏ လိုအပ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီသည့် ပရောဂျက်များ သို့မဟုတ် ထုတ်ကုန်များကို အချိန်တိုအတွင်း ပို့ဆောင်ပေးနိုင်သည်- PVC၊ CPVC၊ PPR နှင့် အခြားသော ထုတ်ကုန်များ စတင်ထုတ်လုပ်ခြင်းမှ နောက်ဆုံးထုတ်ကုန်များ၏ ပုံများအထိ၊ သို့မဟုတ် 3D ပုံနှိပ်ခြင်း သို့မဟုတ် စမ်းသပ်မှိုဖြင့် ပြုလုပ်ထားသော တကယ့်အရာဝတ္ထုများပင်။မှိုစီးဆင်းမှုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းမှိုဒီဇိုင်း၊ တပ်ဆင်ခြင်းနှင့်စမ်းသပ်ခြင်းအထိ;ပိုက်တပ်ဆင်ခြင်းမှ နောက်ဆုံးပေးပို့ခြင်းအထိ၊မှိုထိန်းသိမ်းခြင်းမှ အခမဲ့ အစားထိုး အစိတ်အပိုင်းများအထိ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဖောက်သည်များ၏ စိတ်ကျေနပ်မှုကို ရနိုင်သည်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ အကြီးမားဆုံး လှုံ့ဆော်မှု ဖြစ်ပါသည်။
အကယ်၍ သင်သည် ယုံကြည်စိတ်ချရသော ပိုက်မှိုရောင်းချသူအား ရှာဖွေနေပါက၊ ကျွန်ုပ်တို့ထံ ချက်ချင်းဆက်သွယ်ပါ။Longxin မှို၏ကျွမ်းကျင်သောအရောင်းအဖွဲ့သည်သင့်အားအမြန်ဆုံးဆက်သွယ်လိမ့်မည်။